Valin-kafatra ho an’ny polisy momba ny « Raharaha Arnaud » : mitaky porofo amin’ny namoahana gadra ny mpiandry fonja | NewsMada
Valin-kafatra ho an’ny polisy momba ny « Raharaha Arnaud » : mitaky porofo amin’ny namoahana gadra ny mpiandry fonja
Raikitra fifamaliana sy fifanazavana momba ny maha voarohirohy ny eo anivon’ny fandraharahana ny fonja fa namoaka gadra hanao kidnapping. Nitondra fanazavana momba izany ny sendikàn’izy ireo, omaly tetsy Andrefan’Ambohijanahary.
« Takinay ny porofo amin’ny filazana fa namoaka voafonja hanao izany ny eo anivon’ny fandraharahana ny fonja. Mandalo vaomiera manokana avokoa ireo mahazo alalana hiasa any ivelan’ny fonja vao mivoaka. Tsy misy mahazo mitondra telefaonina izany koa izy ireo… », hoy ny filohan’ny sendikàn’ny mpandraharaha ny fonja, Realy César, tamin’ny mpanao gazety. Nanteriny fa efa ireny ny vokatry ny famotorana sy ny fanadihadiana ka tokony havela hanao ny asany fitsarana.
Nanamafy izany rahateo ny eo anivon’ny mpirakidraharahan’ny fitsarana, tamin’ny alalan’ny filohan’ny sendikàny, Rabenandrasana Nicolas, fa tokony hosazina ireo nanao kidnapping ary tompon’andraikitra amin’ny ataony izy. « Tsy misy resaka namanamana izany eto. Tokony hiharan’ny sazy na iza na iza », hoy izy.
Voamarin’ny polisy ny namoahana voafonja
Ny fiandohan’ny herinandro teo anefa no nanitrikitrika ny eo anivon’ny polisim-pirenena fa manana porofo izy ireo amin’ny namoahana voafonja hanao izany asa ratsy izany. « Maromaro ireo voafonja mivoaka ary voamarinay avokoa izany. Anananay ny porofo eto am-pelatanana », hoy ny fanazavan’ny lehiben’ny BC Anosy.
Tsy vitan’izany. Nahagaga ny polisy koa ny nahafahan’i Freddy, migadra eny Tsiafahy nefa afaka nifandray an-telefaonina tamin’ireo mpaka an-keriny. « Tamin’ny fomba ahoana ny nahafahany nanao izany ? », hoy ihany ny BC.
Iza sy aiza ny tena atidoha ?
Manoloana ireo rehetra ireo, mifandray ny asan’ny mpitandro filaminana sy ny eo anivon’ny fandraharahana ny fonja. Misy tsy milamina izany raha miainga amin’ireo voalaza rehetra ireo. Aiza ny olana ? Iza no manao inona ?
Etsy andaniny, tombanana fa tsy ireo jiolahy ampolony ireo, irakiraka sy mpanatanteraka, ihany no ao ambadik’iny raharaha fakana an-keriny iny. Aiza sy iza ny tena atidoha sy mpibaiko. Tambajotra matanjaka sy lehibe rahateo izy ireo.